ခိုချေးကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသလား | Page4| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ခိုချေးကြောင့် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသလား
ခိုတွေရဲ့ ချေးထဲမှာ Cryptococcus လို့ ခေါ်တဲ့ မှိုတစ်မျိုး ပါပါတယ်။ အဲဒီ မှိုပိုးပါတဲ့လေကို ရှူမိရင် ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ ပမာဏနည်းနည်းလေးကတောင် ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
>> ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးသွားနိုင်လဲ?
ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက် ဘာမှမဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကိုယ်ခံအားမကောင်းတဲ့ လူတွေအတွက်ဆိုရင် ဒီပိုးဟာ အဆုတ်ပိုးဝင်တာအပြင် ဦးနှောက်အမြှေးပါးယောင်တဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ နာတာရှည်ရောဂါရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေတဲ့သူတွေမှာ အသက်သေဆုံးတဲ့အထိ အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။
ဒီရောဂါပိုးဟာ လူလူချင်းတော့ မကူးစက်စေနိုင်ပါဘူး။
>> ခိုချေးဟာ ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ရှိသလဲ?
အခုပြောပြခဲ့တဲ့ Cryptococcus ရောဂါပိုးအပြင် salmonella လိုခေါ်တဲ့ ဝမ်းရောဂါပိုးလည်း ပါနိုင်တဲ့ အပြင် တခြားရောဂါမျိုးစုံလည်း ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။
ခိုချေးကို ထိတွေ့ပြီးတိုင်း လက်ကို သေချာဆေးကြောပါ။ ဒီနေရာမှာ ခိုကို ကိုင်တွယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အစာကျွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြုလုပ်ပြီးတိုင်းလည်း လက်ကို ဆေးဖို့လိုပါမယ်။
တကယ်လို့ သင်ဟာ ကိုယ်ခံအားနည်းသူတစ်ယောက်၊ HIV/ AIDS ရောဂါ ဒါမှမဟုတ် ကင်ဆာရောဂါ ခံစားနေရသူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ခိုချေးနဲ့ လုံးဝ မထိတွေ့သင့်ပါဘူး။